Kpee Okpokoro Ibu Ibu Ibu Nke Ibu Nke Ozo
Home » Mmeju » Kpee Okpokoro Ibu Ibu Ibu Nke Ntughari
Akwụsịla Isi Blast Free Trial
Na-ele anya ka ogelata oge okpomọkụ a? Ọ bụrụ na anyị nwere nnukwu akụkọ maka gị! Maka obere oge nanị, ịnwere ike ịnweta karama ikpe nke Forskolin Body Blast.
Na-eche ihe hyp bụ maka Forskolin? Nke a bụ nkọwa ụfọdụ maka ihe mgbagwoju anya bụ:
A na-ahụ ụlọ ọrụ ike, forskolin, na mgbọrọgwụ nke coleus forskohlii osisi, nke bụ ahịhịa nke sitere na ezinụlọ mint. Ndị nchọpụta achọpụtala na nso nso a kpochapu uzo ga-enyere aka belata abụba siri ike ma mee ka ụbụrụ ahụ dịkwuo njọ. Ihe mgbakwunye a na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ndị nwoke na ụmụ nwanyị.
N'adịghị ka mgbakwunye nri ndị ọzọ nke na-enye nsonaazụ oge, Forskolin nwere ụzọ dịgasị iche iche na-ebute ọnwụ. Ọ na-arụ ọrụ n'ọfịs cellular ọ bụghị nanị na ọ na-eme ka abụba abụba dị ike ma na-egbochi njikọta abụba n'ọdịnihu. Nke a na-enyere gị aka ọ bụghị naanị ibu ibu kamakwa ịhapụ ya kpamkpam!
June 26, 2018 Admin Mmeju Enweghị asịsa